Standard Ro mvura kurapwa maitiro (HMJRO-2000LPH) - China Xi'an Homey Technology
2000LPH demineralized wakachena Ro maitiro Brief kurairirwa: 2000LPH Reverse Osmosis Potable Water Purifier ari revatema STRUCTURAL kugadzira. The hoses uye shinda zvakakodzera chisimbiso. Inzwi Its duku nokuda nyore kufamba, chokugadza maintanence. Zvinhu nokuti mudziyo uri ngura nemishonga, zvakasimbisa mapurasitiki, nickel-alumimum yendarira, kugadzirisa mvura ngura problem.The gadziriro rinoshandiswa nokuti unonatsa mvura TDS pasi 2000ppm uye zvapararira mvura pashure zvakaipa CA ...
Material: Carbon simbi
Nyorai: Ro huru module pasina pre-kurapwa
No zviri Kamudzira: 8 hrs kubva 4040 Kamudzira
2000LPH demineralized wakachena Ro maitiro
2000LPH Reverse Osmosis Potable Water Purifier ari revatema STRUCTURAL kugadzira. The hoses uye shinda zvakakodzera chisimbiso. Inzwi Its duku nokuda nyore kufamba, chokugadza maintanence. Zvinhu nokuti mudziyo uri ngura nemishonga, zvakasimbisa mapurasitiki, nickel-alumimum yendarira, kugadzirisa mvura ngura problem.The gadziriro rinoshandiswa nokuti unonatsa mvura TDS pasi 2000ppm uye zvapararira mvura pashure zvakaipa zvinogona kunwa zvakananga.
1, The mbishi mvura pombi mvura, matunhu neminisiparati mvura (TDS: ≤2000ppm)
Kutekeshera goho: kan maererano nezvaidiwa (25 ° C)
Sea mvura chiyamuro tembiricha: 4 ° C ~ 45 ° C
2, kutekeshera goho unhu: TDS≤600-700 ppm, WHO kutungamirira kunwa mureza.
3, Power wedzerai: 220V / 380V, 50 / 60Hz
* Mvura daily kunwa kuti munharaunda, chikoro, hotel, mafekitari nezvimwewo
* Desalination mvura inoshandiswa huku
* Mvura kushandiswa chinwiwa, zvokudya indasitiri nezvimwewo
Main zvikamu spec .:
HMJRO-2000LPH Booster pombi CHLF4-40 CNP 4m3 / h, 32m
Goldstone jecha firita 450 * 1650 HTCOMA FRP
F56D kuzvidzora vharafu RUNXIN
Kusashanda kabhoni firita 450 * 1650 HTCOMA FRP
F64D kuzvidzora vharafu RUNXIN
emadhaka firita G1 "* 20" HENGXIN ABS
yakakwirira kumanikidzwa pombi CDL4-190 CNP 3.6m3 / h, 160m
Ro Kamudzira BW30-400 DOW TFC
yemagetsi kudzora maitiro Ro-2008 Create
1. mvura Raw pump- kupa kumanikidzirwa silica jecha Sefa / vanoshingaira kabhoni Sefa
2. Silica Sand filter- kubvisa turbidity, rwoga nyaya, makemikari nyaya, colloid uye zvichingodaro
3. Active Carbon Sefa-Bvisai ruvara , free chloride, makemikari nyaya, kunokuvadza nyaya uye zvichingodaro
4, Softener-kuderedza kwekuoma mvura
4. Micron Sefa-usabate deposition makuru nezvimedu, vakawanda utachiona, uye mavhairasi mumba Ro Kamudzira, kururama ndiko 5um, nokuti anorega chero particulates makuru akadai simbi guru, guruva, rwoga nyaya, netsvina.
5. kumanikidzwa High pump- Ichapa yakakwirira kumanikidzirwa Ro Kamudzira (kanenge 2.0 Mpa).
6. Ro maitiro-Ro hurongwa Nde chikamu yakaisvonaka yemvura kurapwa chirimwa. The Ro Kamudzira wacho desalt mwero inogona kusvika yakakwirira sezvinoita 99%, zviri anokwanisa kubvisa pamusoro 99% kubva ions, mabhakitiriya, inoramba uye 98% pane makemikari.
Kushanda kwacho uye vachindiedza:
Previous: Standard Ro mvura kurapwa maitiro (HMJRO-1000LPH)
Next: Standard Ro mvura kurapwa maitiro (HMJRO-5000LPH)
Kunwa Water Treatment System
kudhaya Water Treatment Plant
Kwakachena Water Treatment Systems
harungashandurwi Osmosis Equipment
Harungashandurwi Osmosis Membrane
harungashandurwi Osmosis Water Machine
Ro Kunwa Water Treatment
Ro System Water inosuka Plant
Water Kucheneswa Equipment
Water Kucheneswa Treatment
Water muzvinatse System